Ha isku dayin in aad fartaada……..Balse sidaan u qanci Gacalisadaada!! - iftineducation.com
Ha isku dayin in aad fartaada……..Balse sidaan u qanci Gacalisadaada!!
aadan21 / February 15, 2017
iftineducation.com – Ceeb ma ah in labada lamaane ay is weydiiyaan qaabka midka kale uu raaxada ku helayo , hadaba hadii aad dooneyso in aad heshaan raaxo macaan habkaan raaca.
Ninyahoow marka hore weydii lamaantaada sida ay dooneyso in aad ugu raaxeyso iyo koobaha kacsiga ay ka daremeyso , gabaryaheey adna sidoo kale ayaa laga rabaa.
Niyahoow durba malabyarowga haka saarin macaantaada hana ka kicin , sidoo kale gabaryaheey u sheeg in uusan ka kicin hadii isaga uu kaa hor biyo baxay .
Xiliga aad sameyneysaan raaxada waxaa muhiim ah in nafsiyan diyaar u tihiin oo aysan jirin mashquul dhanka maskaxada ah maxaa yeelay raaxada macaan wax ay timaada marka nafsiyan diyaar loo yahay .
Sidoo kale waa in jirka uu ahaada mid u diyaarsan maxaa yeelay jirka isaga oo daalan kaama saacidayo in aad raaxo hesho , sidoo kale saqda dhexe ma wacna raaxada waayo jirka waa daalan yahay oo fir fircooni malaha waayo waxaa laga yaabaa in midkiina uu hurdo ka kacayo.
Tanina rag badan waa ilaawaan oo durba sariirta dhanka kale uga jeestaan waxana la dhihi karaa ma mudna kuwaas in lala raaxeysto. Hadii aad talo iyo tusaale ama su,aal aad qabto fadlan kala soo xiriir ciwaankeena hoos ku qoran.
Farxada Guurka Waa Farxada Galmada ay Lamaanahu Wadaagaan.
Hadaad sidaan u fareyso qayladayda deriskaaga laga maqlaa